​प्रचण्डको भित्री दाउ
रवीन्द्र श्रेष्ठ । पुष्पकमल दाहालले राजपासँग सहमति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर दोस्रो चरणको चुनावलाई अलपत्र पारेर अगाडि नै राजिनामा दिनुको रहस्य अब प्रष्ट हुँदैछ । दोस्रो चरणको चुनावको घोषणा भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए अन्यौलता बढ्छ भन्दै एमाले समेतले पनि राजिनामा नदिनलाई आग्रह गरेका थिए । यसको वास्तविक कारण दुईटा देखिन्छ । पहिलो, मधेशमा दोस्रो चरणको चुनाव गराउन कठिन परिस्थिति । दोस्रो, देउवा पक्षसँग आगामी सबै… विस्तृत समाचार
एमालेको शीरमा जनताको नासो
केपी शर्मा ओली । केही अप्रिय र अवाञ्छित घटनाहरू बाहेक पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हो । पहिलो चरणको सफलतासँगै अब हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान बाँकी प्रदेशहरूमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गर्न केन्द्रित हुनु जरुरी छ । निर्वाचनको वातावरणलाई बिथोल्न सक्ने, निर्वाचनको स्वच्छतामाथि आँच पु¥याउने र मतदाताहरूलाई अन्यौल र द्विविधामा पु¥याउने कुनै पनि कामहरू… विस्तृत समाचार
​प्रहरी र हाम्रो लोकतन्त्रको गन्तव्य
विशाल क्षेत्री । प्रजातन्त्रको शोभा भनेको स्वाभिमानमा बसेको हुन्छ । स्वाभिमान म, मेरो, हामी, हाम्रो भन्ने अपनत्व दर्शाउने भावनामा घनिभूत भएर रहेको हुन्छ । प्रजातन्त्रमा अधिकार त्यहाँसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ, जहाँबाट अरुको अधिकारमा अतिक्रमण हुँदैन । अरुको अधिकार र स्वाभिमानमा अतिक्रमण गरेर आफ्नो प्रजातन्त्रको जन्मदिन मनाउन पाइन्न । प्रजातन्त्र त्यसै प्रजातन्त्र भएको होइन । प्रजातन्त्र भनेको समान अवसर, न्यायिक सर्वोच्चता, सक्षमताको उच्च मूल्यांकन, मानव अधिकार र… विस्तृत समाचार
​उपेन्द्रलाई टेलिभिजनमा हेर्दा
बिन्दिया प्रधान । शनिबार दिउँसो अचानक टेलिभिजन खोल्दा सगरमाथा च्यानलमा एक अन्तर्वार्ता आइरहेको थियो । बीचमा हेरिएकोे उक्त अन्तर्वार्ताको बिषय भने हालैको स्थानीय तहको चुनाबी परिणामको बिश्लेषण नै रहेछ । त्यो अन्तर्वार्ता दिने ब्यक्ति थिए डा.उपेन्द्र देवकोटा । डा.उपेन्द्र देवकोटा नेपालका वरिष्ठ नशा रोग विशेषज्ञ र स्नायू चिकित्सक हुन् । सुरुमा उनले सरकारी अस्पताल वीर अस्पतालमा बिरामीको टाउकोको तथा ढाडको हड्डी खिइएको ठाउँमा नसा च्याप्पिएर… विस्तृत समाचार
​कसको एजेन्डामा हिंड्दैछन् प्रचण्ड–बाबुराम ?
रवीन्द्र श्रेष्ठ । यसपालीको स्थानीय सरकारको चुनावमा गोरखामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पार्टी माओवादी केन्द्रको शर्मनाक पराजय भयो र कांग्रेसले विजयउत्सव मनायो । बाबुराम भट्टराईले माओवादी केन्द्रलाई हराएर कांग्रेसलाई जिताउन निर्णायक भूमिका निभाए । दाहाल र वावुरामको पार्टीले पाएको मत जोड्दा गोरखाका ९ स्थानमा जित्ने देखिन्छ । यसैगरी आइतबारसम्म घोषित परिणाममध्ये कांग्रेसले जितेका १०२ स्थानको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार ४० स्थानमा दाहालको पार्टीले कांग्रेसलाई जिताउन निर्णायक भूमिका निभाएको… विस्तृत समाचार
​किन उदाए रन्जु दर्शना ?
विशाल छेत्री । काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय दुवै दलका केन्द्रीय नेताहरुले गरे । त्यही निर्णयअनुरुप एमालेले उपमेयरमा आफ्नो उम्मेदवार उठाएन र राप्रपाले मेयरमा एमालेलाई छाडिदियो । तर, ५० प्रतिशत मत गन्दासम्म एमालेका मेयरका उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले कांग्रेसका राजुराज जोशीसँग ९ हजार हाराहारी मतले अग्रता लिइरहँदा उपमेयरमा राप्रपाका राजाराम श्रेष्ठ निकै पछाडि छन् । बरु मेयरमा एमालेले पाएकै… विस्तृत समाचार
​चेन अफ कमाण्ड भत्काउन नदिंदा महाअभियोगको ब्रम्हास्त्र
बुद्धिराम शर्मा नेपालमा सुरक्षा निकाय तथा अदालतहरुले चेन अफ कमाण्ड भत्किँदाको पीडा र त्यसबाट उत्पन्न हुने दुरावस्थाका बारेमा त्यति पीडादायी अनुभव भोग्नुपरेको इतिहास ज्यादा लामो छैन तथापि आज चेन अफ कमाण्ड भत्किँदाको पीडा आलो घाउ बनेर नेपाली मुटुमा बल्झिरहेको छ । खासगरी प्रचण्ड सरकारको पहिलो कार्यकालको नौ महिना पनि बित्न नपाउँदै गौरवमय इतिहास बोकेको विश्वमा नै ख्याती प्राप्त नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई हठात्… विस्तृत समाचार
​उज्यालोका नाममा अँध्यारो धन्दा
विशाल छेत्री । चुनावको मुखैमा सरकारले भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको इनर्जी इफिसियन्सी सर्भिस लिमिटेड (ईईएसएल) कम्पनीबाट नौ वाटका दुई करोड थानएलईडी बल्ब खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । माओवादीका पूर्वलडाकू कमाण्डर एवं ऊर्जामन्त्री जनाद्र्धन शर्माको प्रस्तावमा माओवादीकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषदले यो निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि नै भारतीय कम्पनीसँग उक्त खरिद सम्झौता भने भइसकेको थियो । दुई करोड… विस्तृत समाचार
​आफू जित्नेभन्दा पनि एमाले हराउ अभियानमा प्रचण्ड
रवीन्द्र श्रेष्ठ । वैशाख ३१ को स्थानीय चुनाव सकिए पनि दोस्रो चरणको चुनाव जेठ ३१ मा सम्पन्न गर्न गम्भीर कठिनाइ विद्यमान रहेको छ । पहिलो चरणको चुनाव हुनुलाई प्रधानमन्त्री दाहालको ठूलो सफलता भनेर भजन गाउने क्रम पनि सुरु भएको छ र दाहालले यसलाई आफ्नो जीवनको ठूलो उपलब्धि भनेर भाषण गर्ने क्रम पनि सुरु भएको छ । तर यथार्थमा मधेशी मोर्चाले उनीहरुको मागअनुसार संविधान संशोधन नभए… विस्तृत समाचार
​जनउत्साहको त्यो क्षण
बिन्दिया प्रधान । धुलो धुँवा र ठेलमठेल भीडरहित शान्त काठमाडांै । खालीखाली सडक । मौसमले पनि साथ दिएकोे । दिन केही खुल्दै केही धुम्मिदै गर्दै गरमका बीच अपरान्ह परेको पानीले शीतलता प्रदान गरेको । यस्तै केही शीतल अनि केही गरम हुदै खुला वातावरणमा बिहान सबेरै देखिनै जनलहरको त्यो उत्साह । मानौ हामी कुनै ठूलो चाड नै मनाइरहेछौँ । बीस वर्षपछि सम्पन्न हुन गएको स्थानीय निकायको… विस्तृत समाचार